Yakasarudzika Lanyard fekitori - China Yakasarudzika Lanyard Vagadziri uye Vatengesi
Yakasiyana neyetsika lanyard, iwo akagadziriswa lanyard anowedzera kutarisa. Iyo lanyard inogona kugadzirwa neinopenya mhedzisiro, ichiwedzera matombo enhinhi, kana kuwedzera vanhu vanodirana. Iyi lanyard inogona kushandiswa mune dzakakosha zviitiko. Semuenzaniso, iyo inopenya mhedzisiro inoita kuti lanyard ioneke murima, iyo inoshandiswa zvakanyanya muhusiku kumhanya, kirabhu yehusiku uye nezvimwe. Iyo logo ingangove inonakidza inoratidzwa murima. Kuwedzera rhinestones kana kudirana mavara kunoita kuti lanyard iwedzere fashoni. Rhinestones pane kupenya pasi pezuva, vasikana vanosarudza kune idzi lanyard. Iyo lanyard inotengeswa inopisa pasi peaya mafashoni zvinhu. Ivo vechidiki vanofarira aya lanyard uye inova mucherechedzo wefashoni. The Logo aigona mudzidziso zhinji pezvakaitwa akadai silkscreen yokudhinda, kupisa kuchinjirwa, dzakarukwa uye etc. Iwe unogona kuvhiringidzika pane maitiro anoshandiswa maererano neyako yakagadziriswa lanyards. Siya mibvunzo iyi kwatiri, timu yekutengesa yehunyanzvi ichapa mazano akakodzera, kwete chete inoita kuti logo iratidzike, asiwo inokwikwidza pamitengo. Mira kuzeza uye taura nesu kamwechete. Jian anozove wako wenguva refu uye akavimbika mupiki.
Heat Kutamisirwa Lanyards